merolagani - हिमालय ऊर्जाको आईपिओ भर्नुभयाे ? साेमबार अन्तिम दिन
हिमालय ऊर्जाको आईपिओ भर्नुभयाे ? साेमबार अन्तिम दिन
हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी (HUBCL) ले सर्वसाधारणमा बिक्री खुला गरेको आईपिओमा आवेदन गर्ने चैत २५ गते सोमबार (आज) अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले चैत २० गतेदेखि जारी पूँजी ९९ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला गरेको थियो।
आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्ताका लागि पाँच हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ६ हजार ५०० कित्ताका लागि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आवेदन दिन पाइनेछ। संस्थापक सञ्चालक, र आयोजना प्रभावितका लागि शेयर खरिद गरिसकेका व्यक्तिले यस आईपिओमा आवेदन गर्न पाउने छैनन् ।
कम्पनीले यसअघि रामेछाप र दोलखा जिल्लाको आयोजना प्रभावित बासीन्दालाई यस अघि नै कार्तिक ६ देखि मंसिर ५ गतेसम्म ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ९० हजार कित्ता आइपिओ निष्काशन गरि पुस ६ गते बाँडफाँड गरिसकेको छ।
रेटिङ्ग भने कमजोर
यस्तै मेरो शेयर प्रयोगकर्ताले यसको प्रयोग गरेर शेयर भर्ने सुविधा रहेको छ। आईपिओमा सोमबार कार्यालय समयभित्र आवेदन गरिसक्नुपर्नेछ।
विसं २०५६ सालमा स्थापना भएको यस कम्पनीले रामेछाप र दोलखामा बग्ने खिम्ती खोलामा १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको अपर खिम्ती आईआई (II) आयोजना निमार्ण गरेको छ। आयोजना रामेछाप र दोलखाको सीमामा पर्छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड ५५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्तीको विद्युत बाहल अवधि विसं २१०४ पुस २ र ७ मेगावाटको अपर खिम्ती II आयोजनाको वि.सं. २१०६ चैत १२ सम्म बाहल रहनेछ।
उपल्लो खिम्ति तथा अपर खिम्ति २ जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब १४ करोड ६३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यी आयोजनाबाट लगानी फिर्ता हुन ६.२१ वर्ष लाग्ने विवरण पत्रमा उल्लेख छ । डिस्काउन्टेडमा लगानी फिर्ता हुने (पे ब्याक) अवधि भने ९.४३ वर्ष छ।
२.७३ गुणा बढीको आवेदन
हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीको आईपिओमा ३७ करोड ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ।
बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गका अनुसार चैत २४ गते आइतबारसम्म ५१ हजार ३०० बढी आवेदनबाट ३७ लाख ३५ हजार ३०० कित्ता शेयर माग भएको हो।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले १३ लाख ६६ हजार २०० कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरेको थियो। यो सर्वसाधारणमा निष्काशन भएको शेयरको तुलनामा २.७३ गुणा बढी हो।